Home Somali News Guddi ka tala bixiyay xilliga qabashada WC 2022
Guddi ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee adduunka, FIFA, oo kulan ku yeeshay dalka Qatar, ayaa ku talo bixiyay in koobka adduunka ee sanadka 2022-ka la qabto bilaha November iyo December ee sanadkaasi.
Madaxa gudigan loo saaray in uu ka talo bixiyo xilliga ugu wanaagsan ee Qatar lagu qaban karo ciyaaraha adduunka ee 2022-ka, ayaa BBC-da u sheegay in xilliga ugu macquulsan uu yahay bilaha ugu dambeeya ee sanadka.
Heer kulka dalkaasi ayaa sareeya sanadka oo dhan, waxaana uu hoos u yara dhacaa dabayaaqada sanadka.
Arrintaasi ayaa dhibaato ku noqon doonta kooxaha waaweyn ee ka dhisan Yurub, kuwaas oo doonaya in ciyaaraha koobka adduunka la qabto bisha May, si uu u yaraado hakadka ku imaanaya tartamada horyaaladooda.
FIFA ayaa go’aanka kama dambeysta ah arrinkan ka gaari doonta bisha soo socota.
Deg Deg: Badhasaabka Gobalka Awdal Oo Hanjabaad Culus U Diray Maamulka Puntland + Muuqal
War Deg Deg Ah:-Madaxwayne Siilaanyo Oo Goordhaw u Baxaya Gobolka Saaxil Iyo Ujeedada Socdaalkiisa
Shirkada Caalamiga Ah Ee Somsite Oo Qiimo Dhimisti Ugu Balaadhnayd U Fidisay Macaamisheeda
Somaliland: Oo Ka Hadashey Khilaafka Ka Dhex Qarxay Somaliya Iyo Kenya + [ Dhinacee Bay Taageertay ]